Ambato Boeny: niakatra fitsarana ireo mpanao kidnapping | NewsMada
Ambato Boeny: niakatra fitsarana ireo mpanao kidnapping
Niakatra fitsarana, omaly, ireo tratra tamin’ny fakana an-keriny ilay Karana vavy mpandraharaha, i Housna, tany Ambato Boeny.
Ny alakamisy 31 janoary no nanafika ilay tokantrano nisy ireo Karana ny dahalo miisa 40 tokony tamin’ny 11 ora alina. Nokapain’izy ireo ny famaky ny lohan’ilay raim-pianakaviana, ary nentin’ireo nanaraka azy i Housna Ramjanaly monina ao Ankijabe, distrika Ambato Boeny.
Nitaky vola 400 tapitrisa ariary ireo dahalo tamin’izany. Nanao vela-pandrika ny zandary ka nanao fotoana tao anaty alan’Ankarafantsika. Nahatazana ireo zandary ireo dahalo ka vaky nilefa, fa navelan’izy ireo teo ilay Karana vavy. Narary rahateo ity farany.
Nitohy mandrake alina ny fanenjehana ka tratra ny dimy lahy. Natao ny famotorana sy ny fikarohana ka 11 lahy sy vavy telo ny voarohirohy izay niakatra fitsarana omaly. Andrasana ny valin’ny fitsarana.